Funda iNkqubo yeNdibaniselwano yoRhwebo e-2 kaJanuwari 2022 | Bhalisa ngoku!
Funda ngo-2 Urhwebo unikezela ngenkqubo yokubambisana enenzuzo kwiiwebhusayithi ezisebenza kwi-forex, kwi-cryptocurrency, nakumacandelo abanzi orhwebo. Ngoku siyenye yeempawu ezikhula ngokukhawuleza kwihlabathi liphela-ngejelo leTelegram ngoku eliqhayisa ngamashumi amawaka amalungu.
Eli phepha lichaza indlela abaxhasi bethu abasebenzisanayo ngoku bonwabela isabelo sengeniso esivulekileyo sama-40% kumbhalisi ngamnye omtsha omthumelayo kwinkonzo yethu nganye ekhulayo yokuthengisa iTelegram.
Yintoni uLwazi 2 loRhwebo?
Phambi kokuba sichaze ukuba isebenza njani inkqubo yokubambisana-sivumele ukuba sinikezele ngolwazi olungemva malunga nokuba ngubani u-2 oRhwebayo. Emva kwayo yonke loo nto, sikhetha ukwakha ubudlelwane bexesha elide nabantu esidibana nabo- ke kubalulekile ukuba uyiqonde kakuhle indlela esebenza ngayo iqonga lethu.
Imveliso ephambili enikezelwa yi-Learn 2 Trade yinkonzo yesiginali ebonelela ngeengcebiso zorhwebo ngexesha langempela ngeTelegram. Sisebenzisa iqela labathengisi abanamava ngaphakathi endlwini-elowo esenza uphando kunye nohlalutyo imini yonke. Olona xanduva lweqela lethu kukufumana amathuba okurhweba ngokuchasene nomngcipheko kwaye sinike umqondiso kumalungu ethu ngeenkcukacha ezithi mazibekwe.
Sisebenza ikakhulu kwimarike ye-forex kunye ne-cryptocurrency, nangona kunjalo, siyabandakanyeka kwamanye amacandelo orhwebo. Oku kubandakanya isitokhwe, ii-indices kunye nezinto zorhwebo. Xa sithumela umqondiso wokurhweba kumalungu ethu, oya kuthi ubandakanye lonke ulwazi abaludingayo ukuze babeke iiodolo ezicetyisiweyo kwindawo yabo yomrhwebi. Ngokwendalo, oku kubandakanya imakethi, nokuba inde okanye imfutshane, kunye namaxabiso asebenzayo ekuyekiseni ilahleko nakwi-odolo yenzuzo.
Iinketho zokufikelela kwiqela leVIP
Funda i-2 yoRhwebo inikezela ngamacebo amabini asisiseko entengo kumalungu ethu. Oku kubandakanya isicwangciso sasimahla kunye nesicwangciso seprimiyamu. Ngokwemigaqo ye-crypto kunye ne-forex, isicwangciso sasimahla sinika amalungu ethu iingcebiso ezi-3 ngeveki. Oku kunembono yokunika amalungu ethu amatsha uvakalelo malunga nendlela yokufunda imiqondiso yorhwebo 2.
Akukho mfuneko yokuba amalungu eqela lasimahla leTelegram anike naluphi na ulwazi lwezemali. Ekugqibeleni, banokuhlala kwisicwangciso sasimahla okoko befuna.
Nangona kunjalo, sifumanisa ukuba uninzi lwamalungu ethu asimahla ekugqibeleni anyusela kwelinye lamacebo ethu epremiyamu. Kulapho wena njengeqabane elidibeneyo uza kufumana isabelo sobulungu benyanga esihlawulwe lilungu lesicwangciso seprimiyamu osithumela ngendlela yethu.
Sivumele ukuba siqhekeze iindlela ezahlukeneyo zokukhetha amaxabiso esizinikezela kwizicwangciso zethu zepremiyamu:
Isicwangciso senyanga enye: £ 1
Isicwangciso senyanga enye: £ 3
Isicwangciso senyanga enye: £ 6
Isicwangciso sobomi bonke: i- $ 250
Iqela lokurhweba le-Swing: i- £ 50
Uninzi lwababhalisi bethu bahlala bengamalungu ahlawulelwayo rhoqo. Oku kuthetha ukuba kwinyanga nganye yokuba bahlala bengumbhalisi ohlawulelwayo we-Learn 2-uya kuba nelungelo lesabelo se-40%.
Sivumele ukuba sikunike umzekelo olula:
Ngenyanga yokuqala-amalungu angama-10 atyikitye kwisicwangciso sepremiyamu ngekhonkco lakho lokudibana- ukhetha ukhetho lwenyanga e-1 kwi- £ 35
Oku kukhokelela kwingeniso iyonke ye- $ 350- ke ikhomishini yakho engama-40% ifikelela kwi- £ 140
Ngenyanga yesibini-usithumela abanye ababhalisile abangama-20-bonke abakhetha isicwangciso seenyanga ezi-1. Ixabiso elipheleleyo le- $ 700 kwingeniso- kunye ne- £ 280 kwimivuzo edibeneyo
Ukucinga ukuba onke amalungu ali-10 ukusukela kwinyanga enye ahlala elilungu elihlawulelwayo kwinyanga yesibini- leyo iya kuba yi- £ 140 eyongezelelweyo kwimivuzo yokudibana
Njengoko ubona kumzekelo olula apha ngasentla- uya kuhlala ufumana i-40% kwiintlawulo zekhomishini kuthi ngalo lonke ixesha ilungu lihlala lingumbhalisi ohlawulelweyo.
Kutheni le nto sibhala uPhononongo kunye nezikhokelo?
Uyakuqaphela ukuba uLwazi 2 loRhwebo likhaya kwilayibrari ebalulekileyo yezikhokelo kunye nokuphononongwa. Oku kubalulekile - njengoko sifuna abafundi bethu ukuba babe ngabarhwebi abaphumeleleyo ekuhambeni kwexesha. Sinezikhokelo kuyo yonke into ukusuka kwindlela yokuthengisa i-forex kunye neeCFD, indlela yokuthengisa ngokufutshane, indlela yokusebenzisa amandla, iindlela zokurhweba kunye nokunye.
Sikwabonelela ngobuninzi bomthengisi ongakhethi cala kunye novavanyo lweqonga lokurhweba. Oku kubalulekile-njengoko abafundi bethu kufuneka basebenzise iqonga elilawulwayo ukuze benze imiqondiso yethu.
Joyina iNkqubo yethu yokuDibana
Ukuba ungathanda ukujoyina inkqubo yokubambisana-ungenza njalo ngokunqakraza kwikhonkco elingezantsi kwaye ulandele imiyalelo ekwi-screen.
Zuza iipesenti ezingama-40 zerhafu ngokwahlulahlulwayo kumntu ngamnye obhalisileyo
Ikhomishini ihlawulwa inyanga nenyanga lowo ubhalisileyo ahlala elilungu elihlawulelwayo
Elinye lamaqela akhula ngokukhawuleza e-forex kunye neqela le-Telegraph le-crypto kwihlabathi liphela
Ngenye indlela, ukuba unemibuzo malunga neNkqubo yokuDibana ne-2 yorhwebo-zive ukhululekile ukunxibelelana nathi.